Kukura kwekushanya nezano: Zambia inotarisa kunzvimbo dzakachengetedzwa dzemitambo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Kukura kwekushanya nezano: Zambia inotarisa kunzvimbo dzakachengetedzwa dzemitambo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zimbabwe Breaking News
Nyika yeCentral Africa Zambia, kusvika parizvino, yakapona zvakanyanya pakurima nekuchera, kunyanya kugadzirwa kwemhangura. Zvino, zvakadaro, inoda kusiyanisa hupfumi hwayo - uye kushanya kunoitisa chikamu chepakati.
"Kuvandudza chikamu chekushanya chikamu chehurongwa hwekusiyanisa hupfumi hwedu," akatsanangura Charles R. Banda, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, kuITB Berlin neChitatu. Nechikonzero ichi, Zambia, yegore rino Convention & Culture Partner kuITB Berlin, haisi kungokwezva vashanyi chete asiwo vanoita mari
"Pasi rose rakagamuchirwa kushanyira Zambia - uye tinogamuchirwa kuti tibatsire mukugadzira zvigadzirwa zvedu pamwe nemari," akatsanangura Banda. Kugadzikana uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvinoita basa rakakosha mukuvandudza zvivakwa zvekushanya. "Tikasachengetedza hunhu hwedu saka ticharasikirwa nezvose uye hapana chasara chatingaratidza," akavimbisa Banda.
Uye nyika ine zvinyowani zvekuratidza: iyo inozivikanwa Victoria Falls inonyanya kuwanikwa muZambia, yakakurumbira Big 5 - yega yega safari-goer kurota - inogona kuwanikwa muZambia, uye nzvimbo inochengetedzwa yemhuka yemusango yeZambia, South Luangwa National Park, yakatoziviswa ichangoburwa senyika yekutanga kuchengetedzwa inochengetedzwa pamwe neUNWTO.
"Kana usingazive Zambia," akadaro Banda nechivimbo, "hauzive Africa."